I-Baandin (Izaphulelo ezinomtsalane kwiindawo ezihlala ixesha elide)
Ubhubhani we-COVID19 usenze sonke ukuba sikuqonde ukubaluleka kococeko kwaye singakuthathi lula. Qiniseka, siye safikelela kumaqabane ethu ukuze siphakamise eyona migangatho iphezulu yogutyulo nokhuseleko.
Relax, uphinde utshaje iibhetri zakho kwaye uzive ngathi ulikhaya kwindawo yangoku, ecocekileyo, enencasa entle nekhuselekileyo ebekwe ePetchaburi. Eli candelo libandakanya uluhlu olubanzi lwezinto eziluncedo njenge-wifi yasimahla, i-Ac, ukugcinwa kwendlu yonke imihla, isicima-mlilo, indawo yokwamkela kunye neCCTV. Iikhamera kwiindawo zikawonke-wonke.
Qhagamshelana nombuki zindwendwe ngesaphulelo sokuhlala ixesha elide
Ihotele edumileyo yohlahlo lwabiwo-mali e-Hua Hin OYO 712 Baandin Resort ihlala ikwindawo entle ngenxa yezizathu ezininzi. Le hotele yohlahlo lwabiwo-mali e-Hua Hin, ePrachuap Khiri Khan ibekwe kumgama omalunga neekhilomitha ezi-2 ukusuka eRobinson Lifestyle Petchaburi. Ifumaneka kumgama oziikhilomitha ezi-2 kuphela ukusuka kwi-Robinson Lifestyle. Umdibaniso ogqibeleleyo wentuthuzelo noxolo, le propathi yanamhlanje yonganyelwe ngaphakathi okusemgangathweni kunye neemfuno zangoku zokuhlala okumnandi. Le hotele inezixhobo ezisisiseko ezifana ne-24/7 yokungena, iiCamera zeCCTV, iWifi yasimahla ukuze kube lula kunye nokuhambela iindwendwe.
IPhra Nakhon Khiri Historical Park
Tham Khao Luang Umqolomba
I-Chao Samran Beach
IProjekthi yoPhuhliso loPhando lweNdalo yaseLaem Phak Bia
Indawo yokutyela yaseKiwa
Cafe / bar 38/3 TAPHOUSE
Iivenkile ezinkulu kunye neevenkile zokutya
Iivenkile eziPhezulu zentengiso uRobinson Phetchaburi
IMarike yoBusuku beMarike, iKhlong Kra Saeng, iSithili saseMueang Phetchaburi, Phetchaburi 76000
Ngaba ufuna into? Nceda uzive ukhululekile ukufikelela kum. Ndiyafumaneka kwinkonzo yakho 24/7.